दिल्लीमा पनि भेटियो निर्मलाको पोष्टर !
काठमाडौँ- कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको चार महिना बितिसक्दा पनि हत्यारा पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै सरकारलाई दबाव दिन विभिन्न अभियान संचालन भैरहेको छ।
सडकका पेटी देखि खम्बामा समेत निर्मलालाई न्याय माग गर्दै पोष्टरहरु टासिएको छ। अझ सामाजिक संजालमा पनि निर्मलाको न्यायको लागि भन्दै विभिन्न अभियान जारी रहेको देख्न सकिन्छ।
“सरकार भेटियो न्याय भेटिएन” लेखिएको पोष्टरहरु राजधानीसँगै विभिन्न शहरमा देखा पर्न थालेको छ। स्वतन्त्र युवाहरुको एक समूहले टाँसेको पोष्टरलाई प्रहरीले च्यातेको भन्दै ब्याग, मोटरसाइकल र छातिमा टाँसेर सांकेतिक विरोध भैरहेको छ।
निर्मलालाई न्याय माग गर्नको लागि बनाइएको पोष्टर नेपालमा मात्र नभई भारतको राजधानीमा समेत देखा परेको छ। ट्वीटरमा सुवोध अधिकारी नाम गरेका एक व्यक्तिले दिल्लीमा निर्मला भन्दै एक तस्विर सार्वजनिक गरेका छन्।
दिल्लीमा निर्मला!#JusticeForNirmala #RageAgainstRape #WhoKilledNirmala pic.twitter.com/yXOXdlS5CQ
— Subhash Adhikary (@subry2000) December 6, 2018
दिल्लीको एक पोलमा “सरकार भेटियो न्याय भेटिएन” लेखिएको पोष्टर टाँसिएको तस्विरमा देख्न सकिन्छ। साथै पृष्ठभूमिमा भारतको झन्डा पनि देखिने तस्विर उनले अपलोड गरेको तस्विरमा देख्न सकिन्छ।
प्रकाशित : बिहिबार, मङि्सर २०, २०७५१८:३१
मङ्सिर १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक निर्णयहरु आज सार्वजनिक ! के-के भए निर्णय ?